जम्मू–कश्मीर विवादः विश्वशक्तिलाई सूचना, सुरक्षा सल्लाहकार पनि पुगे कश्मीर – Makalukhabar.com
जम्मू–कश्मीर विवादः विश्वशक्तिलाई सूचना, सुरक्षा सल्लाहकार पनि पुगे कश्मीर
मकालु खबर	 २०७६ श्रावण २२ ०१:२२ प्रकाशित 50 0
साउन २१, काठमाडौं । भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्ता खारेज गरेसँगै अबको परिस्थिती बारेमा छलफल र बहस तातेको छ । अब जम्मु कश्मीर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुने भएपछि त्यहाँको भावी राजनीतिक अवस्थाको बारेमा चासो बढेको हो ।
कश्मीर टुक्राएर लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ । यस घटनापछि कश्मीर मामिलामा केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले कश्मीर समस्या विकराल हुने बताएका छन् ।
भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको छ । संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको हो ।
सरकारको नयाँ घोषणासँगै जम्मु कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ । आइतबार रातिबाट विकसित यस घटनाक्रममा नेशनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मु कश्मीर पीपुल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ । श्रीनगरमा भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ । यो आदेशअनुसार मानिसहरूको स्वतन्त्र आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन् । श्रीनगरमा फोन, मोबाइल फोन र इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि सिंगो कश्मीर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । कश्मीरको केही भू–भाग भारतमा र केही भू–भाग पाकिस्तानमा छ । स्वतन्त्र कश्मीर मुलुक बनाउने भन्दै कश्मीरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ । यसक्रममा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ ।
कश्मीरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच चार पटक युद्ध भइसकेको छ । जम्मु कश्मीरका राजा हरिसिंहले भारतमा विलय हुने सन्धि गरेकाले भारतले जम्मु कश्मीर सबै आफ्नो भू–भाग भएको दाबी गर्छ । हाल जम्मु–कश्मीरको भूमि भारत, पाकिस्तान र चीनमा पर्छ ।
जम्मु कश्मीरमा चालिएको कदमलगत्तै भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल कश्मीर पुगेका छन् । त्यहाँको सुरक्षा स्थिति उनले आफैं आँकलन गर्न थालेका छन् । सोमबार मात्रै सैनिक हवाईमार्गबाट कश्मीरमा दश हजार सैनिक पुर्याइएको छ । डोभालले सेनालाई पनि तयार रहन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
उनले दुई साताअघि पनि कश्मीरमा बसेर सुरक्षा योजना बनाएका थिए । त्यतिखेर उनले सुरक्षा अधिकारी र राज्यपालसँग छलफल गरेका थिए । कश्मीरमा हाल केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) र भारत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) तैनाथ गरिएको छ । केही दिनयता मात्रै थप ४८ हजार सैनिक कश्मीरमा पठाइएको छ ।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु कश्मीरमा शान्ति कायम भएपछि पूर्ण राज्य बनाइने बताएका छन् । जम्मु कश्मीरको विकासका लागि धारा ३७० हटाउनु परेको पनि शाहले दाबी गरेका छन् ।
उनले राज्यसभामा बोल्दै भने, ‘धारा ३७० कायम गर्नुको फाइदा कसैले बताउन सक्छ ? यसबाट जम्मु कश्मीर र भारत दुवैलाई केही फाइदा छ ? यसकै कारण १९८९ देखि हालसम्म ४१ हजार ८४९ जनाको ज्यान गयो ।’
जम्मु कश्मीरमा गरिबीका लागि उक्त धारा जिम्मेवार रहेको पनि शाहले दाबी गरे । सन् २००४ देखि २०१९ सम्म २७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्दा पनि कुनै विकास हुन उनले नसकेको बताए । धारा ३७० बाट कश्मीरका केही परिवारले फाइदा लिएको र जनता पीडित भएको उनले बताए ।
जम्मु कश्मीरमा चालेको नयाँ कदमबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमवार अन्तराष्ट्रिय शक्तिलाई जानकारी दिएको छ ।
विदेश सचिव विजय गोखलेले चीन, फ्रान्स, रूस, अमेरिका र बेलायतसहित अन्य देशका कूटनीतिज्ञलाई भेटेर जानकारी दिएका छन् । गोखलेले धारा ३७० हटाइएको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको पनि विदेशी कूटनीतिज्ञलाई जानकारी दिए ।
जम्मु कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । जम्मु कश्मीरमा आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्यायका लागि आफूले उक्त कदम चालेको भारतीय भनाइ छ ।
भारत सन् १९४७ मा १५ अगस्तमा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको थियो । अंग्रेजले भारतलाई दुई भागमा बाँडेर गएको थियो । त्यतिखेर अंग्रेजले बाँकी भारतीय राज्यलाई भारत वा पाकिस्तानमा गाभिने वा स्वतन्त्र रहन सक्ने अधिकार दिएका थिए । अधिकांश मुलुक भारतमा विलय भएका थिए ।
जम्मु कश्मीरका शासक महाराजा हरि सिंहले आफ्नो देश स्वतन्त्र रहने निर्णय गरेका थिए । त्यहाँका जनता अधिकांश मुस्लिम भएकाले उनीहरू आफूमा गाभिने अपेक्षा पाकिस्ताने गरेको थियो । तर, त्यसो नभएपछि १९४७ अक्टोबर २० मा पाकिस्तानी सेनाको समर्थनमा ‘आजाद कश्मीर सेना’ले कश्मीरमा आक्रमण गरेको थियो । तर महाराज हरि सिंह हिन्दु भएकाले भारतसँग सहयोग मागे ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतमा विलय हुन आग्रह गरे । हरि सिंहले २६ अक्टोबर १९४७ मा भारतसँग सम्झौता गरे । उक्त सम्झौतामा जम्मु कश्मीरमा भारतीय रक्षा, विदेश र सञ्चार कानुन लागू हुने उल्लेख गरिएको थियो । पाकिस्तानी सेना रहेको भू–भाग भने पाकिस्तानमै रह्यो ।
अब भारतीय नागरिकले घरजग्गा किन्न पाउनेभारतीय संसद्ले बनाएको कानुन लागू हुनेभारतीय झण्डा मात्र फहराइनेराज्यपालको पद खारेजकेन्द्रीय सरकार मातहतको प्रहरीराज्य सरकार राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्न सक्नेदोहोरो नागरिकता खारेजकेन्द्र शासित राज्यविधानसभाको कार्यकाल ६ बाट घटाएर ५ वर्षलद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश (विधान सभाविहीन)कश्मीरको बेग्लै संविधान नहुनेअन्य प्रदेशका व्यक्तिले नोकरी गर्न पाउनेजम्मु कश्मीरका महिलासँगको भेदभाव उन्मूलन (कश्मीरका महिलाले अन्य प्रदेशका व्यक्तिसँग बिहे गरे सम्पत्ति पाउँदैनथे)
संविधान रामायण होइन, जतिबेला पनि संशोधन हुन्छः सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा